Abaqhankqalazi baseHong Kong bazama nzima ukufumana i-US ingqalelo - Ihlabathi
Abaqhankqalazi baseHong Kong bazama nzima ukufumana i-US ingqalelo
ehong Kong Ithunyelwe ngoSeptemba 15, 2019, 3:46 pm Vivek Prakash / AFP / Getty Imifanekiso
I-HONG KONG-Ngoqhanqalazo lwaseHong Kong kwiveki yabo ye-15, kwaye ungquzulwano olunobundlobongela luphantse lube yinto yesiqhelo, abanye basebenzise indibano yamva nje njengesibongozo kuluntu lwezizwe ngezizwe ukuba lungenelele kwaye lwaphule umqobo phakathi kwabaqhankqalazi bedemokhrasi kunye norhulumente waseHong Kong.
Uninzi lwabantu abathathe inxaxheba ngeCawe babambe iiambrela ngelixa behamba, bezikhusela elangeni lasemva kwemini, ngelixa abanye bewangawangisa iiflegi zase-United States njengoko babehamba ezitratweni. Abaqhankqalazi abaliqela baxelele Iindaba zeBuzzFeed ukuba bebephethe iflegi yelizwe lasemzini kuba befuna ukujonga ngaphaya korhulumente wabo njengoko imeko iya isiba mandundu.
Andiqondi ukuba urhulumente waseHong Kong angenza enye into kuba kufuneka athobele iQela lamaKomanisi laseTshayina, utshilo uCandice Wong, umqhankqalazi okwiminyaka yakhe engamashumi amane, owayephethe iflegi enkulu yaseMelika njengoko wayemi ngaphandle kweGadi yeChater.
UWong uthe uwangawangisa iflegi njengesibheno kurhulumente wase-US, ebonisa inkxaso yakhe kuMthetho wamaLungelo oLuntu waseHong Kong kunye noMthetho weDemokhrasi okhoyo ngoku kwiNdlu yeeNgwevu zase-US, kunye nokumela amaxabiso anethemba lokuba iHong Kong ingawazalisekisa. . Yena kunye nabanye abaqhankqalazi abathe bathetha neMC chatel bacaphula umthetho oyilwayo weSenate ngamagama xa bethetha ngamathemba abo okungenelela kwe-US.
ingcamango yeminyaka emitsha yokuhombisa
Kwimpelaveki ephelileyo, abaqhankqalazi waqhankqalaza ukuya kummeli waseMelika ngesibheno esifanayo, kunye nebhena enye ebiza uMongameli uDonald Trump ukuba akhulule iHong Kong.
I ityala lamacala amabini , eyaziswa ngoJuni nguMarco Rubio, iRiphabhlikhi yaseFlorida kunye nabaxhamli abasixhenxe, baya kugweba iHong Kong kunye namagosa aseTshayina afunyanwe ebandakanyeka ekucinezeleni inkululeko esisiseko eHong Kong. Kule veki iphelileyo, iiSenetha ezininzi zisayine kwibhili, kubandakanya uKirsten Gillibrand, iDemocrat yaseNew York, kunye noSusan Collins, waseRiphabhlikhi waseMaine.
URubio usanda kupapasha i-op-ed kwiWashington Post ukugxeka ukungenelela kweTshayina kwinkululeko yaseHong Kong kwaye ucela i-US ukuba ingenzi nto. I-United States kunye noluntu lwamazwe aphesheya kufuneka lucacise kwiinkokheli zaseTshayina kunye nabarhwebi bamandla ukuba ukuhlasela kwabo eHong Kong kubeka emngciphekweni okhawulezayo, onzima kunye neziphumo ezihlala zihleli, ubhale uRubio.
iseti yokuma simahla
Ukusukela oko uqhanqalazo lwaqala ngoJuni malunga nomthetho oyilwayo oza kuvumela abantu ukuba bathunyelwe kwilizwe lase China ukuya kujongana namatyala, abaqhankqalazi banezicelo ezintlanu, eziquka ukurhoxisa umthetho oyilwayo, ukuphanda ubundlobongela bamapolisa, kunye nenkululeko yehlabathi jikelele.
I-China yaqala yaphendula ngokuvala uqhanqalazo kwilizwekazi, kwaye ukusukela oko yatyhola ukungenelela kwamanye amazwe ngodushe. A kutsha nje China Daily yokuhlela ubalule ubukho beeflegi zaseMelika kuqhanqalazo njengobungqina obungaphaya bokuba uqhanqalazo lusaqhuba kuphela ngenxa yemikhosi yangaphandle. IBeijing nayo yalumkisa i-US ukungazibandakanyi eHong Kong kwiingxelo ezithe ngqo ezivela kwiSebe lezaNgaphandle.
Njengoko isihlwele sasisuka eCauseway Bay sisiya kuMbindi, eyona ndawo iphambili yokuthenga kunye neshishini ledolophu, uKyle Tsang, omnye umqhankqalazi owayenxibe zonke ezimnyama, wawangawangisa iflegi yase-US kwindawo yokhuseleko ebhasini ukuze bavuye kwisihlwele, njengoko babecula ezintlanu. iimfuno, hayi enye ngaphantsi.
Emva kokuba ehlile, uKyle Tsang wandixelela ukuba wayephakamisa iflegi yase-US ukuze abhenele e-US ukuba iphumelele i-HK yenkululeko kunye ne-democracy bill esele inabaxhasi abali-16 njengale veki.
08:28 AM - 15 Sep 2019
Ingoma iye yaba yinto eqhelekileyo yokuyeka uqhanqalazo emva kokuba uCarrie Lam esanda kuthi uzakurhoxisa umthetho oyilwayo. Kodwa abaqhankqalazi bathi akusaneli ukusombulula le meko.
Abantu baseHong Kong bakwimeko emaxongo ngoku, utshilo uWong, ekhankanya ungquzulwano lwamva nje namapolisa odushe amkhuthaze ukuba aphume ngeCawa.
Sifuna amazwe aphesheya kunye nezixeko ukuba zithathele ingqalelo into eyenzekayo eHong Kong, uTsang uxelele iMC chatel xa ehla ephuma kwindawo yokuhlala ibhasi. Naye uthe unethemba lokuba i-US iya kuwupasisa umthetho oyilwayo.
yenza iimbovane njengepelepermint
UJoshua Wong, inkokeli yoqhanqalazo lwe-Umbrella Movement kwi-2014, uye wenza izibheno ezithe ngqo kwiinkokeli zamazwe ngamazwe ngoncedo lwabo, kuquka ukubiza ukwenza imeko eHong Kong ibe yinxalenye yeengxoxo zorhwebo phakathi kweChina kunye ne-US.
UYoshuwa Wong @joshuawongcf
I-HK kufuneka ifakwe kwiingxoxo zorhwebo xa ijongene nesoyikiso somthetho we-karate kwaye i-China inokuthumela imikhosi kuqhanqalazo. Ukuba i-China ayinanjongo yokukhusela inkululeko yezoqoqosho ye-HK kunye neshishini elivulekileyo, lichaphazela kwaye lonakalise uqoqosho lwehlabathi. https://t.co/yWIOyxKuGS
06:58 AM - 15 Sep 2019
I-US inokucudisa iHong Kong ngokwezoqoqosho ngokurhoxisa iwonga layo elikhethekileyo, nto leyo eyenza urhwebo notyalo-mali lube lula kwi-hub yezemali yamazwe ngamazwe. Abaqhankqalazi, ngokufanayo, bajolise kwisikhululo seenqwelomoya kunye neendawo ezinkulu zokuthenga kunye nezokhenketho-isicwangciso esiye sabonakala sisebenza ngokufika esixekweni. bawe 40% , idatha yamva nje ibonisa. Kodwa akucaci ukuba ekugqibeleni olo xinzelelo luya kwanela ukwenza i-China iguqe malunga nokuba zingaphi iinkululeko eza kuzinika ummandla we-semiautonomous. Kwaye kunikwe iingxelo eziguquguqukayo zikaTrump eziye zaqala ukusuka inkxaso yokusingatha le meko kaXi Jinping ukufowunela uXi ukuba dibana ngqo nabaqhankqalazi, i-US iphakamisa inkxaso yayo kubaqhankqalazi ayisosiqinisekiso.
Uqhankqalazo lwangeCawe, olungavunywanga ngamapolisa, lusuke emva kwemini eluxolweni lwaya kungquzulwano olungakumbi kwisithuba nje seeyure, njengoko iqela labaqhankqalazi laqala ukugibisela amatye, izitena, kunye nenqwaba yee-cocktails zeMolotov phezu kwemiqobo yeplastiki ngaphandle kwesakhiwo seBhunga lezoMthetho.
Umboniso ongaphandle kwe-LegCo ufikelela ekubeni yirhasi yokukrazula kunye nekaMolotov kunye nezitena ezigityisiweyo
09:26 AM - 15 Sep 2019
Imililo emincinci yaqhuma kumacala omabini ezithintelo. Amapolisa adubule izintywizisi, nto leyo engenzanga nto ukuchithachitha abaqhankqalazi bebezilungiselele kakuhle, nababechopha emva kwemiqobo bejikijela amapolisa ii toti. Ekugqibeleni amapolisa ayisusa le ndawo ngokubeka iinkanunu zamanzi kuqala, emva koko ekugqibeleni amapolisa odushe.
Umbala wepeyinti obalaseleyo kwigumbi lokuhlambela
Amapolisa amaninzi aphuma elandela inkanunu yamanzi ngoku
10:27 AM - 15 Sep 2019
Umgca ongaphambili woqhanqalazo uye waya ngasempuma emva koko - kuqala waya eWan Chai, emva koko waya eCauseway Bay, kwaye kamva eNorth Point. Kwaye ngelixa ukruthakruthwano oluqhelekileyo ludlala enye iveki eHong Kong emva kweenyanga zodushe, abanye bathi banethemba lokufumana isisombululo.
Asinakuvele sibeke uxinzelelo kurhulumente ngokwethu, sifuna abanye oorhulumente ukuba basixhase, utshilo uJames Chan, umqhankqalazi oneminyaka engama-25 owayephethe iflegi yaseMelika ngeCawa emva kwemini.
amakhaya aphathekayo ngamavili
Xa ebuzwa ukuba ucinga ukuba ibhili iya kuyiphucula imeko yaseHong Kong, uChan warhoxa: Kungcono kunanto.
Eyona app yoyilo yendlu
Eyona mibala iluhlaza okwesibhakabhaka
uyilo olulula lwamagumbi okuhlala
Igumbi lokuhlambela izimvo